Samsung Galaxy Z Flip 3: Kuburitswa zuva, maficha, runyerekupe, uye nhau
Iyo Samsung Galaxy Z Flip ichabudirira neinotevera-chizvarwa clamshell foldable, uye kune tariro iyi Z Flip 3 ichave yekuvandudza kukuru.
Patakaongorora Samsung's Galaxy Z Flip, takadaro tichifara chaizvo. Iyo modhi ine yakagadziriswa ne5G uye iyo Qualcomm Snapdragon 865 Plus, asi ichichengetedza iyo yakafanana dhizaini - zvave ikozvino nekukurumidza. Iko kune zvisinei, zvichiri kukanganisa, sekuratidzira kudiki kwekunze.
Ko iyo Galaxy Z Flip 3 inokwidza zvinhu kumusoro here? Hezvino zvese zvatinoziva nezvazvo parizvino.
Samsung Galaxy Z Flip 3: Zuva rekuburitsa
Galaxy Z Flip yakaburitswa muna Kukadzi 2020; Z Flip 5G muna Nyamavhuvhu 2020
Z Flip 3 inotarisirwa ye 3 Nyamavhuvhu chiitiko uye 27 Nyamavhuvhu kusunungurwa?
Zvinoitika 11 Nyamavhuvhu chiitiko
Dai Samsung yakachengetedza yakajairwa kuburitsa purogiramu, saka Galaxy Z Flip 3 ingadai yakasvika gore mushure mekutanga, ingadai iri munaKukadzi 2021. Izvo hazvo hazvina kuitika.
Panzvimbo pezvo runyerekupe runoratidza kupeta chishandiso vhezheni yeGlass Unpacked ichaburitsa itsva Z Flip uye Z Fold mamodheru musi wa3 Nyamavhuvhu, kutsiva yekambani tsika chitsamba chiitiko - chishandiso chatisingatarisiri kuona muna 2021 zvachose, kana zvikazombovapo zvakare. Pakave zvakare nekutaura kwe11 Nyamavhuvhu zvakadaro.
Zvinonzi Z Flip 3 uye Z Fold 3 zvichazowanikwa musi wa 27 Nyamavhuvhu. Hapana chakasimbiswa zvakadaro.
Dhizaini uye makamera
Dual makamera mune ichangobatanidzwa dhizaini
Yakawedzerwa kavha kuratidza
Mamwe mapaiti eEUIPO akaburitsa maviri mairi kuuya kweiyo Samsung inogona kupetwa foni ine makamera matatu, kunyangwe zvisina kutaurwa zvakajeka kuti ma patents ndeeGlass Z Flip 3, asi inogona kuratidza maitiro eSamsoni kune inotevera-gen dhizaini. Iko kune yechitatu kamera inoratidzwa pane iyo, inogona kunge iri telephoto lens.
Mimwe mifananidzo yazvino yakaburitswa yeiyo inonzi Z Flip 3 - ona mufananidzo uri pamusoro, sekufananidzirwa padhuze neZ Fold 3 - inoratidza kuti chishandiso chichava nemakamera maviri kumberi kwayo. Izvo zvakafanana zvakafanana nekaviri-12-megapixel (main uye Ultra-yakafara lenses) pane iripo modhi - kunze kweFlip 3 dhizaini iri nani zvirinani kubatanidzwa.
Chimwe chikuru chakaburitswa pamusoro peichi chifananidzo ndechekuti kuratidzwa kwekunze kwakatarisana nemakamera aya kwakakura kupfuura mumhando dzakapfuura, pamwe zvichibvumira chizvarwa chinotevera Z Flip foldable foni kuratidza vashandisi rumwe ruzivo rwakakosha pakuona kana rwakavharwa.
Iyi dhizaini yakadzokororwa nekumwe kufambiswa kwemifananidzo uye vhidhiyo yeGlass Z Flip 3 kubva kuGizNext. Mifananidzo yacho inoratidza chishandiso mumhando dzakasiyana siyana, asi dhizaini yacho yakafanana nezvakaratidzwa naBlass kare.
Kumwe kunhu, Samsung yakanyorera chiratidzo chebhizimusi pane izwi rekuti Armor Frame - uye izvi zvakanangana nema smartphones ayo. Zvinofungidzirwa kuti izvi zvinogona kunge zviri zvekuwedzera simba kupeta mafoni. Zvakare kunziwo iyo Galaxy Z Flip 3 ichave neiyo IP chiyero chemvura- uye guruva-kurwisa - kunyangwe zvisingazivikanwe danho rekudzivirira raingawane.
4G uye 5G shanduro?
15W kuchaja kumhanya
Kune vazhinji, iyo Samsung Galaxy Z Flip inosangana nezvinodiwa maererano nebhatiri, kamera uye simba, ichipa chimwe chinhu chakasiyana chinotaridzika kunge chakakura; asi kune vatambi, vanofarira uye vashandisi vemasimba, iyo Galaxy Z Flip ingangove chibvumirano chavanogona kunge vasingade kuita.
Iyo 4G LTE-chete yekutanga Galaxy Z Flip ine Snapdragon 855+ processor, 6.7-inch yekutanga kuratidza (ine resolution ye2636 x 1080 pixels), 1.1-inch cover screen (ine resolution ye 300 x 112 pixels), 3300mAh bhatiri inokwana, mbiri 12MP kumashure-yakatarisana kamera, imwe chete 10MP kumberi kamera, 8GB ye RAM, uye 256GB yenzvimbo yekuchengetera yemukati isina microSD yekuwedzera.
Yechipiri-gen 5G vhezheni inofamba ichienda kune Snapdragon 865 Plus, asi inochengeta mamwe mafekitori. Chero chero remangwana modhi ingangodaro yaenda kune inotevera-gen Hardware, zvingadaro Snapdragon 888 yemhando ipi neipi yepamberi - kunyangwe izvi zvingave zvisina kudikanwa kune iyo clamshell modhi, saka SD870 haifanire kutarisirwa kunze.
Iine Z Flip 3, hatisati tanzwa zvakawanda maererano nema core specs, zvakadaro, CCC rondedzero yakaratidza kuti isu tinofanirwa kutarisira 15W kumhanya kumhanya kwakafanana nechizvarwa chiripo Z Flip 5G. A ichangopfuura FCC Certification, zvisinei, inoratidza kuti ichave iri 9W isina waya kuchaja.
Parizvino, ruzivo rwakaganhurwa nezve kuti ingapetwa sei inogona kuvandudzwa, asi a 120Hz zororo zororo zvataurwa.
Samsung Galaxy Z Flip 3: Kwese kubuda uye runyerekupe
Hezvino zvese kusvika parizvino nezve inotevera-gen Galaxy Z Flip 3.
30 June 2021: Samsung Galaxy Yakasunungurwa 2021 inogona kuitika musi wa11 Nyamavhuvhu
Renders yakaburitswa neGizNext inoratidza zuva racho - 11 Nyamavhuvhu - pachiratidziro, zvichiratidza kuti uyu unogona kunge uri musi waunoratidzwa uye saka iro zuva reSamsung Galaxy Unpacked 2021
30 June 2021: Vanopa veGlass Z Flip 3 vanotsigira kutsika kwakapfuura
GizNext yakaburitsa zvimwe zvinopihwa uye vhidhiyo yeGirazi Z Flip 3 mune akati wandei sarudzo. Iwo anodudzira anofananidza dhizaini yakambobuda.
25 Chikumi 2021: Samsung Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 mifananidzo inodonha
Heino kutarisa kwekutanga kune anotevera-gen foldable.
24 Chikumi 2021: Certification yeCCC inoratidza 5G uye 9W isina waya kuchaja
Zvimwe zvishoma zvine ruzivo zvakaziviswa mufaira reCCC.
22 Chikumi 2021: Samsung Galaxy Z Fold 3 uye Flip 3 yakapihwa 3 Nyamavhuvhu kuburitsa
Chirevo chakati Samsung yakakwenenzverwa kubata isina Unpacked chiitiko musi wa3 Nyamavhuvhu kuburitsa iyo Galaxy Z Flip 3 uye Galaxy Fold 3.
15 June 2021: Leak inonongedza kune nyowani kuburitswa zuva reSamsung Galaxy Z Flip 3 uye Z Fold 3
Chirevo chakataurwa iyo Samsung Galaxy Z Flip 3 ichawanikwa kubva 27 Nyamavhuvhu 2021.
11 Chivabvu 2021: Samsung ichitarisa chiitiko chisina kuvhurwa Nyamavhuvhu kuvhura Fold 3, Flip 3 uye Galaxy S21 FE
Maindasitiri masosi anoti Samsung iri kuongorora chiitiko chaAugust chisina kuburitswa chekutangisa iyo Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 uye iyo Galaxy S21 FE.
7 Chivabvu 2021: 15W kumhanya kumhanya kunoratidzwa nechitupa chinyorwa
China CCC (kana 3C) ine chitupa chinyorwa iyo inoratidza iyo Z Flip 3 ichave iine 15W magetsi adapter, kungofanana neyakatangira.
3 Chivabvu 2021: Samsung Galaxy Z Flip 3 uye Z Fold 3 zvakanyatso kuburitswa mumifananidzo yakaburitswa
Twitter mushandisi @TheGalox_ vakagovana mimwe mifananidzo yekusimudzira paTwitter inoratidza iyo Galaxy Z Flip 3 uye Galaxy Z Fold 3. Iyo Flip 3 inoita kunge ine matoni-maviri dhizaini uye inouya nerima girini, yakajeka violet, beige, grey, nhema, pingi, rima bhuruu, uye chena. Zvese zvinoratidzwa nechikamu chechitema chinogadzira iyo yechipiri skrini ine maviri kamera padivi.
Zvinotaridza kuti Z Flip 3 ichave iine hukuru hwekuratidzira kupfuura iyo 1.1-inch sekondari skrini inowanikwa pane yekutanga Z Flip.
19 Kubvumbi 2021: Samsung Galaxy Z Flip 3 kuve neiyo IP chiyero
Sources kutaura naSamMobile vaburitsa pachena kuti Z Flip 3 ichave ine huwandu hwe IP.
18 Kubvumbi 2021: Samsung trademark Armor Frame
Samsung yakaisa chiratidzo cheArmor Frame, kunyanya kune mafoni, uye zvinofungidzirwa kuti izvi zvinogona kushandiswa yeZ Flip 3.
8 Kukadzi 2021: Samsung Galaxy Z Fold 3 uye Z Flip 3 inogona kuvhura muna Chikunguru
Leaker Ice Universe yakati iyo Samsung Galaxy Z Fold 3 uye iyo Galaxy Z Flip 2/3 inogona kuvhura muna Chikunguru - izvo zvaizoisa kuvhurwa kwemidziyo inotevera inopetwa pakati peiyo Galaxy S uye Galaxy Note.
1 Kukadzi 2021: Samsung Ratidza ichiumburika uye inotsvedza maonesheni
Samsung Display inonzi kuve kutarisa kuvandudza zvinotsvedza uye zvinotenderera zvinowoneka nechisimba kusimudzira hutungamiriri hwayo mumupumburu unoratidzwa.
15 Ndira 2021: Samsung iri kuunza S Pen rutsigiro kune zvimwe zvigadzirwa zvigadzirwa
Samsung yakasimbisa kuti kuwedzera rutsigiro rweS Pen kuGlass S21 Ultra hakusi chinhu chimwe chete: “Takaita danho rakashinga rekuwedzera ruzivo rweS Pen kuGlass S21 Ultra, uye taronga kuwedzera ruzivo rweS Pen pamatanho ekuwedzera emidziyo. munguva yemberi. ”
Izvo zvinonzwika zvisina tsarukano senge isu tinogona kutarisira kuona S Pen rutsigiro zvakanyanya - pamwe mune Z zvishandiso?
29 Zvita 2020: SM-F720F inogona kunge yakachipa Z Flip 3 modhi
Nhoroondo pane a yakachipa Z Flip 3 modhi ramba uchiyerera nenhamba yemuenzaniso uye zvimwe zvekufungidzira nezvekutumidza zita.
16 Zvita 2020: Z Flip 3 inotarisirwa mushanduro mbiri muna 2021
Runyerekupe runoratidza kuti kuchavepo shanduro mbiri yeZ Z Flip muna 2021 - chishandiso chekutanga uye imwe inodhura vhezheni. Inotarisirwa kunzi Z Flip 3, ichisvetuka zita reFlip 2, iro rinoshandiswa zvisina kurongwa ku5G vhezheni yefoni yekutanga.
10 Zvita 2020: Samsung Galaxy Z Flip 3 inogona kudhura zvishoma
Runyerekupe runoratidza iyo Samsung ichave ichiunza mutengo weinotevera-gen kupeta foni pasi kuti uiendese kune yakanyanya.
26 Mbudzi 2020: Inotevera-gen Samsung Galaxy Z Flip inogona kuve ne120Hz kuratidza, kuvhura pakati-2021
Chirevo kubva kuThe Elec chakataura inotevera Galaxy Z Flip inosvika mushure meQ1 2021, nepo leaker Ice Universe ichiti ichave ine 120Hz yekuvandudza mwero kuratidza.
22 Chikunguru 2020: Samsung Galaxy Z Flip yakagadziridzwa ne5G uye Snapdragon 865 Plus yekumhanyisa mhanyisa
Samsung yakazivisa a 5G vhezheni yeiyo Samsung Galaxy Z Flip, asi iyo dhizaini yakafanana neiyo yekutanga Z Flip. Dzimwe dzesimbi dzinogona kuyerera dzichipinda mune inotevera-gen chishandiso, zvakadaro.
20 Chikunguru 2020: Sezviri pachena kuchave neiyo nyowani Galaxy Z Flip pane inotevera Samsung yekutanga mushure mezvose
Ruzivo rutsva inoratidza kuti iyo nyowani vhezheni yeZ Z Flip inofambiswa neQualcomm Snapdragon 865 Plus.
5 Chivabvu 2020: Samsung Galaxy Z Flip 2 inoratidzirwa mune inoshandurwa neakamira makamera, ekunze kuratidzwa
Patent mbiri dzinoonekwa paEIPIPO ne LetsGoDigital uye wozofungidzirazve mune zvadzinoshandura, zarura maviri anogona kuita shanduro dzeSamsung Galaxy Z Flip 2.
21 Kubvumbi 2020: Samsung inogona kuvhura iyo 5G vhezheni yeGirazi Z Flip inopetwa
Samsung yakatanga iyo Galaxy Z Flip inodhinda padivi peiyo Galaxy S20 dzakateedzana kutanga kwegore rino. Inowanikwa mune yeLTE modhi - kunyangwe mushumo mutsva unoratidza kuti Samsung inogona kuzivisa modhi ye5G yeGlip Flip muna2020.
Samsung Galaxy Z Fold 3 Ongororo (Chikamu 1) - Iyo ramangwana tekinoroji, irinowoneka pasi pemaziso edu chaiwo
Samsung Galaxy Fold 2: Rumors, zuva rekuburitsa uye zvese zvatinoziva kusvika parizvino
Samsung Galaxy Z Fold 3 ongororo: Samsung yakanatswiswa zvakapetwa nazvino